Ukungafakwa posterior odongeni sowesifazane sangasese
Ngezinye izikhathi abesifazane ukuya kudokotela-wezifo zabesifazane ngesikhathi yokuthi ukuletha ukukhathazeka kabi sangasese, okuyinto kuphakama wokwehla noma imisipha ukungezwani anterior udonga besisu, futhi ngezinye izikhathi ngisho isimo quiescent, okungaholela izinkinga ezahlukene kulesiya aphila ngayo ngokobulili. Elivela kuzo ngaleso sikhalazo ngokuvamile ehambisana ne-pathology ezifana izitho zangaphakathi shift phansi (prolapse ngokwesayensi). Kuleli zinga, ezingemuva noma ngaphambili sowesifazane sangasese odongeni mabhamuza, ngakho umuzwa khona nomzimba angaphandle e sangasese. Lesi sifo sidinga ukuhlola kanye yokwelapha by ukuhlinzwa ezimweni ezinzima - emgodleni plastic kusiza ukuba sibhekane nale isimo futhi ukuxazulula inkinga ezimbi.
Ukungafakwa posterior odongeni lwesitho sangasese sowesifazane kungenzeka ngokuqondene ukuqunjelwa e abesifazane ngokushintsha isikhundla ezivamile ingemuva. I wezifo zabesifazane ku inhlolovo izocacisa ukuthi kunjalo sinzima. Uma nesigaba lesi sifo uphansi, kuyoba okwanele ukuba afeze izivivinyo ekhethekile nsuku zonke ukuze uqinise kwemisipha ukubuya komzimba kwangaphakathi endaweni. Uma lokhu kungasebenzi, ke udinga ukwenza plastic.
Ukukhishwa odongeni emuva sangasese kungahle kubangelwe izizathu ezilandelayo:
nokuphakamisa izinsimbi kanye noma wenza umsebenzi okhandlayo esikhathini kwangemva kokubeletha;
ukuhlukumezeka ngesikhathi sokubeletha;
Kanyekanye ukungafakwa izindonga lwesitho sangasese sowesifazane ngokuvamile Kutholwe kodwa futhi lesizalo prolapse, (izizathu zingahluka). Lezi izinkinga zixhumene ngobuthakathaka nemisipha futhi izicubu zangaphakathi yobudala sowesifazane futhi kuba nethonya isimo kwezitho zawo. Lezi zinkinga adinga ukwelashwa, okungukuthi ukuqaliswa imisebenzi eminingana: ukulungisa kwesitho sangasese nge lesizalo ventrofixation (lokhu ukumiswa kwesibeletho kuya sacrum usebenzisa laparoscope kumathredi ekhethekile) kanye nokusebenza TVT (ebambe transvaginal ukwesekwa intambo). Inkinga incontinence urinary, lezi izindlela ukuqeda.
Ukukhishwa kwesibeletho. Ukusebenza kanye nezeluleko nesibindi ukuze plastic
Okokuqala udinga ukuthola sibonane, ukuze udokotela ohlinzayo uthintane naye. Udokotela sizohlola nawe nge izibuko ezikhethekile esitulweni izifo zabesifazane kanye ukunquma isimo anterior kanye posterior odongeni lwesitho sangasese sowesifazane noma unganyakazi futhi ngesikhathi zingaphazamisi. Kususelwa luhlolo Uchwepheshe enquma ubunjalo kanye nenani operation (prolapse we posterior lwesitho sangasese sowesifazane odongeni plasty kudinga, kanye phambili). Ngemva udokotela sizoxoxa nawe ezicashile ukusebenza, uhlelo ekhethekile yokulungiselela futhi ngizophinde aphendule yonke imibuzo yakho.
Inqubo yokwenza angioplasty
ukulungisa kwesitho sangasese wenziwa ngaphansi ukubulawa kwezinzwa okuvamile (izinzwa) noma ngaphansi izinzwa emgogodleni. Konke kuncike uhlobo nezinga lombiko kuthengiselana ezihlongozwayo. Uma nje kuhlelwe plastic lwesitho sangasese sowesifazane, kungcono ukusebenzisa izinzwa emgogodleni. Futhi uma kuhlelwe ukwenza eminye ventrofixation kwesibeletho ke kudingeka ukubulawa kwezinzwa okuvamile (ngamanye amagama - izinzwa).
posterior lwesitho sangasese sowesifazane odongeni prolapse ka kubabangele kakhudlwana futhi fallout yayo. Ngokuvamile, lesi simo kancane kakhulu. Njengoba-ke okusolakala? Ekuqaleni lesi sifo, ungase ube nomuzwa wokuthi ubuhlungu ngesikhathi ukunwebeka kwemisipha, ngesikhathi sokuya ocansini singenzeka ubuhlungu ezingemnandi esiswini nasesifundeni lumbar. incontinence urinary kanye ukuqunjelwa ingase futhi kube uphawu lokucindezeleka. Lapho zokugula ziqala ukumila, kuzoba khona umuzwa ukuthi ngaphakathi into ephazamisa, ulwelwesi lwamafinyila iba okwe ngeke waphazamiseka khona kalula. Ngakho-ke, thina akumelwe qhweba ngesandla futhi run isimo, kungcono ubonane onguchwepheshe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Insemination: okwacaca okokuqala? Artificial insemination - basiza ubuchwepheshe zokuzala
Yanyanga zonke ngesikhathi sokukhulelwa ekuseni - kuyinsakavukela noma uzokwaliwa?
Symphysis ngemva kokubeletha: izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa
Izimpawu kanye izimbangela-hemoglobin ongaphakeme kwabesifazane
Mayelana nendlela ababa ngayo iMasons, kusho ukuthini nokuthi leli gama livelaphi
Kungakanani uthola uhlelo e-Ukraine, eRussia nase-United States?
Montenegro: endaweni, labantu, geography, umnotho, inkolo, ezikhangayo
Feliks Magat. Zonke fun of umqeqeshi odumile German
-Notebook ukubuyekeza Acer Aspire Omunye 722: incazelo, imininingwane, kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Class Awezinyoka: umbono jikelele
Indlela imali ngaphandle dolobha qala-up: amanye amathiphu newbie.
Kanjani ukuze ukhethe ukushibilika eqhweni, hhayi aphanjaniswe?
Isigaba 118 soMthetho Wezobugebengu "Kubangela ukulimaza kakhulu impilo ngokunganaki"
Umsebenzi wokuphatha-indawo division of Russia: Umlando kanye yesimanjemanje